Ukubuyekezwa kwe traineeship
Omunye izikhathi ezithakazelisayo kunazo zonke ekuphileni umfundi kuyinto ukuqeqeshwa okuwusizo. Student isikhathi eside ekutadisheni imfundiso yokuziphendukela lokho azokwenza esikhathini eside zokuphila kwakhe, mhlawumbe ukuphila kwakhe konke ebonisa, futhi banikezwe ithuba ukuzama konke empilweni esiyiphilayo. Ngo umkhuba, uzokwazi ukuba baqonde ukuthi i-profession ngempela, uye wakhetha yena, esifanelana.
Ngo umkhuba, kungase kube izici ezingezinhle, futhi omubi kakhulu lapha, njengakwezinye izinto kangaka omunye, kungase ugcwalisa amaphepha, ikakhulukazi - ukubuyekeza ukuqeqeshwa okuwusizo. Ezinye ungase umangale ukuthola ukuthi kuphathelene umholi umkhuba. Kodwa labo siprakthize uyazi ukuthi ukubuyekeza i umfundi internship ngokuvamile ubhala yena (egameni ikhanda), bese ngemvume yinhloko nemikhuba yabo emsebenzini.
Lapho ebhalela Izibuyekezo ngokuvamile kunzima. Nokho, uma abafundi ngokuphelele kuboniswane ngaphambi kokuba siye emsebenzini. Umholi anganikeza impendulo mayelana i-internship, noma isibonelo ifomethi kufanele eyayilotshwe ngalo. Bunake le khumbula. Buyekeza we traineeship kungathinta kakhulu uphawu. Uma kuye kwaba umkhuba omuhle, kodwa ngesikhathi esifanayo ubhale isibuyekezo okubi, kuyokwehlela wenze yonke imizamo yenu lutho practice. Kungcono hhayi namahloni, uma unemibuzo uxhumane umqondisi umkhuba eyunivesithi.
Impendulo i internship - ngokuyinhloko idokhumenti, futhi ngakho-ke kumele babe zonke izimfanelo ezidingekayo: igama eliphelele (lowo okulotshwe asemthethweni), isignesha lwekhanda umkhuba ekukhiqizeni, ukunyatheliswa inkampani lapho babe umkhuba. Zonke kuyoba kahle uma abafundi ngaphambi umkhuba uyomenzela yonke imibhalo ukuthi abafundi kuzodingeka ukuba unikeze emva umkhuba. Ngu umklamo Ungahlala ukusola othisha. Akukona ukuthi uyayithanda, nje othisha futhi ungase ukuthole inephutha abaphathi abasemazingeni aphezulu, ikakhulukazi ikhono ukubhalisa efanele imibhalo ewusizo empilweni.
Akufanele ngokuphumelelayo kuphela uhlele ukubuyekeza, kodwa usigcwalisa okuqukethwe okuhle. Buyekeza traineeship kufanele ukhulume yini eyenze umfundi ngesikhathi umkhuba (yimiphi imisebenzi eyenziwa), ukuthi yimaphi amakhono yingcweti, yiziphi izimfanelo ukuboniswa. Ngokwesibonelo, abafundi bazocula imisebenzi elandelayo: imibhalo abalwa, uzilungiselele imibiko eminingana, njll Umfundi Iyakwazi amakhono: .. okuthuthukisiwe amakhono zokuphatha, ngafunda ukugunda thumela ifeksi, njll On okubonakalisa izimfanelo: .. Laba bafundi kwakufanele bathole emakhonweni okukhulumisana, umuzwa wokuba nomthwalo wemfanelo nokunye .. eminye, ngamafuphi, kuleso siphetho jikelele. Mhlawumbe, uprofesa wase-University ufuna ukhumbule okunye, kodwa ke cishe eziningi it ukuxwayisa abafundi.
Nokho kungase kube ukuhlakanipha hhayi uyephuza ukuhoxiswa ukulethwa. Esimweni ukuthi khumbula okungalungile, kungaba ngcono uma kukhona isikhathi ukuqinisekisa ukuthi ulungise kwamaphutha. Ngaphambi kokubhala amazwana ukubheja yakho kungcono ukuba uthintane elekhanda lo mkhuba. Mhlawumbe ungeyena wokuqala egijima umkhuba wakhe, ngakho imenenja uyazi kahle ukuthi ukubhala. Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ngesikhathi kahle ukuthi umphathi wakho uzongena ngemvume, futhi ngaphansi kwaziphi - akukho. Noma kunjalo, ungakwazi uthintane ne abafundi ngezifundo abaphezulu - sebevele belande Lonke uhlupho lolu mase iseluleko esiwusizo.
Ngeshwa, ukuphila kwethu ngakho wahlela ukuthi linendima ebalulekile, obonakala ulula iphepha - imibhalo. Ngakho-ke kuyadingeka ukwazi indlela ukudweba bese ugcwalisa kubo. Ikakhulukazi icala uma kuziwa emisebenzini yakho professional kanye zemfundo.
Imisebenzi ngosuku evulekile
Emulsion - ingxube ketshezi
Indlela ukungena Petersburg State University of Culture and Ubuciko?
Kuyini iqembu ukuphepha kagesi?
Amanyuvesi Kazan Sibutsetelo
Lapho ingane kumele inikwe ubisi cow sika? Imibono ochwepheshe nemibono yabazali
Indlela yokuphila namuhla, umculi we band "Roots" ngamunye?
Composite isilandiso okuzisholo: izibonelo. izinhlobo isilandiso
Zahabia Ihhotela Beach Resort Indawo abantu 3 * (Hurghada, Egypt): isivakashi phambili ngezibuyekezo nezithombe, indawo, incazelo
Kuqondisa sesihloko ku "PV". "Izimfihlo ekujuleni," "iso elibukhali" ku "PV": Umhlahlandlela
Ukhukhamba anosawoti - ungashiyi ngisho kwelinye izwe
Amavithamini ezinwele "Revalid": ukubuyekezwa kodokotela